Akanakisa asina waya ma routers: Ongororo nekutenga mazano - WebSetNet
Iyo huru isina waya router chinhu chakakosha chehupenyu hwetekinoroji, kungave uri kuvaka imba yakangwara kana kuti iwe unongoda ruzivo rwepamusoro rwuye rwekufambisa mimhanzi uye vhidhiyo kumba. Isu tinosarudza mhando dzepamusoro apa, nekuti kunyange isu vedu vanowana mukana wakakwana wekudonhedza ethernet mukamuri yega yega ine michina-mafoni uye mahwendefa, semuenzaniso-izvo zvinoenderana neWi-Fi yekubatanidza kune network network kana isiri iyo internet.
Twin uye dzimwe nguva zvinopesana zvinodiwa zvekuita kwakanyanya uye nyore kushandisa iko kuri kupa simba kukura uye nekukurumidza kunoitika musika. Kuvandudzwa ndechimwe chezvakakura zvikuru zvemasimba aya, uye kuvhiringidza kudhara kwayo kukuru. Gamba ranhasi rinogona kunge ramangwana rave, rave zvigadzirwa sezvakaita maLinksys neNetgear kuyedza mumwe nemumwe panguva imwecheteyo vachirambidza vanopokana vatsva vakaita saEero naLuma. Asi ndevaya vanopokana avo vakanyatsogadzira, kutanga neEero, yekutanga gadzira kuunza mesh networking kumusika wevatengi we router.
Musika weWi-Fi router yemusika unogona kukamurwa muzvikamu zviviri zvakapamhama: zvekare maomerodhi zvakagadzirirwa kuvhara imba yese, dzimwe nguva nerubatsiro rwemawadhi ekupinda kana nzvimbo dzisina waya dzinosimudzira, neye-pamba-yeWi-Fi masisitimu ayo ane hwaro. chiteshi chine imwe kana kupfuura satellite node. Yedu yazvino nzira yevhavhavhavhavhavha inotarisa pane yekupedzisira, saka yedu yekutanga kunhonga ichave iri muchikamu ichocho. Tichava denderedzwa kumashure uye tipe mazano kune zvekare ma routers zvakare. Dhinha pasi zvishoma uye tichazokurukura maficha iwe aunofanira kutsvaga mune isina waya router uye tsanangudzo dzemamwe jargon iwe wauchasangana nawo kana iwe uchinge watenga imwe.
Yakavandudzwa July 10, 2018 kuti tiwedzere kudzokorora kwatinoita TP-Unganidzo Deco M9 Uyezve. Kunyangwe ichisanganisa inokurumidza yeWi-Fi router ine smart imba hub, uye inosanganisira yakasimba antivirus uye yevabereki kudzora maficha, iyo Deco M9 Plus haina kugogodza iyo Samsung Kubatanidza Imba yayo perch seyedu yatinofarira router kune vakangwara vekumba vanofarira nekuti haina Z-Wave redhiyo pabhodhi (ine ZigBee neBluetooth maredhiyo).
Yakanakisa nzira yeWi-Fi
Chakavanzika chebudiriro yeOrbi RBK50 ndeyeNetgear yakazvitsaurira 4 × 4, 1,733Mbps redhiyo inoshandiswa kudzoreredza data pakati penzira nemasaiti ayo (iyo RBK50 inouya neimwe setiraiti, iyo inonzi neNetgear inokwana kuvhara blanket zviuru zvishanu zvemakumbo). Isu tinodawo chokwadi chekuti iyo Orbi router ine yakavakirwa-mukati matatu-chiteshi ethernet switch (iyo satellite ine ina-chiteshi switch), nekuti iwo madoko anopa zvakanyanya kushanduka maererano nekubatanidza mamwe madhijitari kunetiweki yako, ingave iri NAS bhokisi re nhepfenyuro yemidhiya uye data backup, printer network isingashande paWi-Fi, kana yekare ethernet-chete A / V inogamuchira munzvimbo yako yevaraidzo.
Iyo Orbi RBK50 haisi iyo inodhura-inodhura mhinduro ku $ 400, zvakadaro, uye inodakadza nzvimbo diki. Tichava nekutarisa kweiyo yakakwidzwa-pasi Orbi RBK40 uye RBK30 munguva pfupi.
Anomhanya-up Wi-Fi system
Kufanana neNetgear's Orbi RBK50, iyo Linksys Velop ndeye Tri-bhendi router iyo inoisa imwe ye-Wi-Fi chiteshi kune data backhaul, ichisarudza chishoma-chinomanikidza chiteshi pane kubhururuka. Kusiyana neOrbi, zvakadaro, iyo yakareba yeVelop per-chiteshi chebhendi ndeye 867Mbps (iyo Orbi inoshandisa chiteshi chakagadziriswa chekudzosera kumashure ne1,733Mbps ye bandwidth). Nzvimbo mbiri dzeVelop node dzakaratidza kuve iyo inonaka nzvimbo yekuvhara 2,800 yedu-mraba-tsoka bvunzo pamba neWi-Fi, iyo yaizotichengetedza $ 50 pamusoro pemutengo weOrbi RBK50.
Yakanakisa bhajeti Wi-Fi system
TP-Link's Deco M5 ndeye mesh Wi-Fi system, iyo inoita kuti iite zvakasiyana neyeNetgear's hub-uye-akataura topology (peta pasi pasi kuti utsanangure zvakadzama zvemashoko iwaya). Yese Deco M5 zvikamu zvakafanana, asi imwe inogadziriswa seya router uye vamwe se mesh node. Kana mutengi wako ari padyo ne router, inotaurirana nayo zvakananga. Kana mutengi ari padyo node, inotaurirana neiyo uye data mapaketi aakatumira uye anotambira anokwakuka kubva kune imwe node ichienda kune inotevera kusvika ivo vasvika iyo router. Sezvo iyo imwechete chiteshi inoshandiswa data backhaul, ine mbiri-bhendi mesh network inowanzoburitsa yakaderera bandwidth pane hub-uye-akataura system kana ye-tri-band mesh router ine yakatsaurwa backhaul chiteshi.
Yakanyanya Wi-Fi router yevakanaka-pamba vanofarira
Samsung's Connect Home haisi iyo yakanaka mesh router, uye haisi iyo yakanakisa smart-pamba hub, asi ndiyo yakanaka mesh router ine yakabatanidzwa smart-home hub. Iyo Ungano Yepamhepo yakanakira chatakagara takutora, Sekunde yeSamond 3 router, nekubatanidza nhepfenyuro yeZ-Wave mukuwedzera kune ZigBee uye rutsigiro rweBluetooth. Asi kuedza kwaSamsung kuita kuti chigadzirwa ichi chinakidze kune rakawanda kwazvo mukana vateereri chinobvisa mamwe masimba uye kushanduka kweSmartThings platform inosanganisirwa neiyo router.
Kusarudza yakakodzera mhando ye router
Nepo mapepa edu anotora pamusoro anotarisa pane ese-kumba e-Wi-Fi masisitimu enguva iripo, iri gwara richakubatsira kurongedza kuburikidza nezvakaitika, zviverengero, uye maratidziro ane hukama nemhando dzese dzeWi-Fi ma routers kuti akubatsire kuona kuti ndeupi mhando unokodzera yako zvakanangana nezvinodiwa. Uye ichocho ndicho chisarudzo chekutanga chaunofanirwa kuita: Iwe unoda here yechinyakare router, yeWi-Fi system, kana mbiri-nechinangwa router inogonawo kuita seyakanaka imba hub?
MaWi-Fi masisitimu, sezvatatsanangurwa kare, pfekesa imba yako neWi-Fi uchishandisa akawanda ma node kana satellite. Vanogona kuva anoshanda kwazvo, asi vanogona kunge vasiri sarudzo yakanaka yevatambi nekuti vanogona kuunza lag se data mapaketi hop kubva kune imwe node kuenda kune inotevera. Unogona kukomberedza izvi nekuomesa PC yako yemitambo zvakananga kune rauta (plug switch in the router LAN port kana uchida kuomesa more than one kifaa kwairi). Iwe unogona zvakare kuedza kuomesa nhare dzisina waya kune router saka ivo vanoshandisa ethernet tambo ye data backhaul.
Yepamusoro-yekupedzisira inojairika ma routers inopa yakakwirira-maitiro maitiro iwe ausingazowana mune yakazara-kumba Wi-Fi system. Iyo yeNegear Nightawk X10, semuenzaniso, ine 10Gbps ethernet dhiva yekuchengetedza network.
Tsika ma routers anowanzo kupa kwakanyanya kudzora kutonga kunetiweki yako, iine ma tweakable marongero emhando dzakadai seQoS (Hunhu Hwekushandira), kutamira kuchiteshi, VPNs, FTP maseva, nezvimwe zvakawanda. Mazhinji akavakira-mukati ethernet switch (ina chiteshi kana kupfuura), saka unogona hardwire network zvishandiso zvakananga kune router. Uye ivo vanowanzove neiyo imwe kana maviri USB madoko ayo anogona kushandiswa kugovera printa kana USB chengetedzo nemidziyo yese pane network. Ndingataure kutaura kuti vanhu vazhinji vanotenga zvekare ma-routers havambobata akawanda eaya marongero kana kutoshandisa akawanda ezvigadzirwa zvavo zvepamberi; vanovatenga nekuti yakakwira-end enders inounza nekukurumidza kuita kweWi-Fi.
Yaviri-chinangwa router ine smart kumba maficha ichave neZigBee kana Z-Wave redhiyo inokwanisa kutaurirana nemanzwi, mwenje smart, smart yekupinda kukiya, motorized windows shades, uye yakawanda mimwe michina inoshandisa iwo akafanana protocol. Zvimwe zvinoshandiswa zvakangwara kumba zvinoshandisa Bluetooth, asi ma-routers ese ane maBluo radio ataona kusvika pari zvino anoshandisa iyo protocol chete yekutanga router setup. Securifi's Almond router kate ndiyo inonyanyo kuzivikanwa muenzaniso yeiyo mbiri-chinangwa router, kunyange Samsung yakazivisa yeWi-Fi mesh router iyo inosanganisa SmartThings hub inotsigira ese matatu maprotocol (ZigBee, Z-Wave, uye Makaralı).
Securifi's Almond 3 router inogonawo kuita seyakanaka imba hub, inotenda kuvapo kweiyo ZigBee radio inogona kutaura nemanzwi, magetsi ekugadzirisa, nezvimwe.
Zvimiro zvekufunga mune yeWi-Fi router
Uchasangana nejetetoni jargon paunotengera mutsva Wi-Fi router. Isu tinotsanangura mamwe emashoko akajairika aunosangana nawo (mune alfabhethi).
AP Steering Iyo mesh-network router iyo inotsigira AP steering ichangotungamira vatengi vayo vasina waya kuti vabatane neipi neipi yekupinda yekuwana (AP) inopa iyo yakasimba yekubatanidza kune iyo router (uye nekudaro kune internet).
Backhaul Rutivi rweetaneti inotakura mapaketi e data back kune router uye kunze kune internet. Mamwe matatu-band rese-pamba Wi-Fi masisitimu, anosanganisira weNgegear Orbi uye Linksys Velop, anoisa yakazara isina waya nzira yekudzosera kumashure. Iwe unogonesawo kumisa wiring backhaul nekubatanidza nzvimbo yekuwana kusvika kune router uchishandisa ethernet tambo, asi izvo zvaizoda kuchera maburi mumadziro ako uye kudhonza iyo tambo kuburikidza, basa ruzhinji vanhu vanozeza kubata.
Bhendi kutungamira Iyo router ine ino ficha inogona kuona kana mudziyo wevatengi ari maviri-bhendi achigona (kureva, mutengi akapfekedzwa neiyo Wi-Fi adapta inogona kushanda pane chero 2.4- kana 5GHz frequency band). Iyo router inosundidzira vatengi vaviri-bhendi kuti ibatanidze kune yayo isina-ine-congested network, iyo inowanzo kuve iyo inoshanda pane 5GHz frequency band.
Beamforming Chinhu chakasarudzika che 802.11ac Wi-Fi chiyero chinogadzirisa kushandiswa kweasina waya bandwidth nekutarisa masaisai eredhiyo kuitira kuti data rakawanda risvike kune mutengi uye rinodzika mheni mumhepo. Dzvanya apa kuwedzera kwakadzama kutsanangurwa kwekupenya.
Iyo inotaridzika router inoziva uko vatengi vayo vari munzvimbo yemuviri uye vanogona kutakura mune yakawanda data nekutarisa iwo radio masaini avanotsinhana.
Dual-band vs. tri-bhendi Ine mbiri-bhendi yeWi-Fi router inoshanda maviri discrete network, imwe iri pane 2.4GHz frequency band uye wechipiri pane isingasimbisi 5GHz frequency band. Mamwe ma-tri-band routers akaparadzanisa iyo 5GHz frequency band, vachishandisa nzira dzapasi kushanda imwe network uye nzira dzepamusoro dzekushandisa network yechitatu. Mamwe ma-tri-band routers anoshanda discrete network pane 2.4- uye 5GHz mabhendi, uye yechitatu network kune 60GHz bhendi.
ethernet chiteshi Iyo router inofanira kunge iine maviri ethernet ports akaomeswa (ingava 100Mbps kana gigabit sekondi). Imwe (iyo WAN, kana yakafara nzvimbo network) inobatanidza kune yako yebandanda regedhi (tambo kana DSL modem, semuenzaniso). Iyo imwe (a LAN, kana yemunharaunda nharaunda network) inobatanidza chero chero yakagadziriswa mutengi. Mazhinji-e-home -ana e-Wi-Fi masisitimu ane maviri auto-inogadzirisa madoko anova WAN kana LAN zvichibva pane izvo zvinopinda mukati mavo. Mazhinji madziro ma routers ane yakazvipira WAN port uye yakasanganiswa ethernet switch ine ina kana anopfuura madoko. Iwe unogona kuwedzera huwandu hwe ethernet ports inowanikwa kune yako network nekubvisa ethernet switch mune imwe yeLAN ports. Iwe unokwanisa kuitawo zvakafanana nemapipi ekuwana mune yakazara-pamba Wi-Fi system.
Yakakwira-magumo macustomer routers, akadai seD-Link DIR-890L, ane mana-port ethernet switch uye USB ports.
Guest network Iyi ine network inongopa iyo inopa vashanyi vako internet apo ichivharira kupinda kune yako pachako makomputa, NAS mabhokisi, uye vamwe vatengi vetiweki.
Hub-uye-akataura vs. mesh network Mune hub-uye-akataura network topology, imwe neimwe isina waya yekunongedza inoshandura data mapaketi zvakananga ne-router. Vhiri rengoro rinogadzira mufananidzo wakanaka pano. Mune mesh network, isina waya yekupinda mapepa ari kure neiyo router anogona kuchinjana data mapaketi neavo ari pedyo AP muvakidzani kusvikira mapaketi asvika iyo router (uye zvinopesana). Muchiitiko ichi, iwe unogona kumuona nemambure ehove; kana kuti zvimwe achiramba, mubati wemoto wemuridzi wemoto.
MU-MIMO Iyo rinomiririra inomiririra mushandisi yakawanda, yakawanda yekuisa / dzakawanda kubuda. MIMO inotsanangura nzira yekutumira nekutambira inodarika chiratidzo chimwe cheruzivo uchishandisa iyo radio radio. Izvi zvinoitwa uchishandisa nzira inozivikanwa sekuti spatial multiplexing. Mukuita kwayo kwepakutanga mune ma-routers, zvishandiso zvevatengi zvaifanira kutora mukana wekutaurirana neiyo router, inotenderera-robin maitiro. Iko kushandura kunoitika nekukasira zvekuti zvipenga hazvikwanisi, asi zvinodzora kukurumidza kutapurirana kukurumidza. Izvi zvinozivikanwa seSU-MIMOYA (mumwe-mushandisi MIMO). Sezvaungafungidzira, MU-MIMOZO inoita kuti vatengi vakawanda vatengi vataurirane neiyo router panguva imwe chete pasina kukanganisa, zvakanyanya kuwedzera kukurumidza kwekutakura. Izvo zviviri router uye mutengi vanofanirwa kutsigira MU-MIMOZO kuti hurongwa hushande.
Iyo yekudzivirira kwevabereki inoita kuti iwe uturase mhando dzezvinhu izvo mutengi mudziyo unokwanisa kuwana kubva kune yako network network
Vabereki vane simba Iyo internet inogona kuva isingafadzi uye kunyange ine njodzi nzvimbo yevana kushanyira. Router-based kutungamira kwevabereki kudzora kunovimbisa imwe kuchengetedzwa nekumisa ipapo munhu anogona kubhuroka uye izvo zvavanogona kuita ivo vachiri online. Kudzora kwakadaro kunogona zvakare kudzora maawa apo mudziyo unobvumidzwa kuva online - inini chishandiso chiri padandemutande remutyairi. Nzira nemaitiro-uye kushanda-kwakasiyana-siyana. Ndichiri kuona system iri nani pane kungova nehurukuro yakavhurika uye yechokwadi nevana vako, asi iwo angori mafungiro angu.
Hunhu hweBasa (QoS) Pfungwa iyi inotsanangura kugona kwemutyairi kuona mhando dzakasiyana dzemapaketi edatha anofamba pamusoro petiweki obva apa iwo mapakeji akakwira kana epasi pekutanga Iwe ungangoda router yako kuti ipe network traffic yakadai sekutamba vhidhiyo kana VoIP (Voice over Internet Protocol) inoshevedza zvakakwirira kutungamira pane kurodha faira, semuenzaniso, nekuti yekutanga haibvumiri kukanganiswa. Kumirira kwechinguva chidiki kuti faira rirairirwe zvakanyanya zvakanyanya kutarisa vhidhiyo inonamira.
Spatial hova Zviratidzo zvakawandisa zvinotsanangurwa mu MU-MIMO pamusoro zvinodaidzwa nzvimbo nzvimbo. Huwandu hwemaredhiyo nemaantena mu router zvinotara kuti ingani hova dzenzvimbo dzainogona kutsigira; uye nzira inoshandiswa kukodha iyo data, inosanganiswa neiyo bhanji bandwidth, inotarisa kuti yakawanda sei data inogona kukwana mukati mega rukova. Iyo 802.11ac router inoshandisa chiteshi iyo iri 80MHz yakafara inogona kununura kuburitswa kweanosvika 433Mbps per spatial rwizi. Nzvimbo dzenzizi dzinoshanda zvakafanana, saka kudziwedzera kwakafanana nekuwedzera nzira munzira huru. Iko 2 × 2 802.11ac router (miviri yenzizi nzvimbo yekufambisa uye maviri kuti agamuchire) inogona kuendesa kubudikidza kusvika pa867Mbps, 4 × 4 802.11ac router inogona kuendesa kusvika 1,733Mbps. Idzi idzi nhamba dzekufungidzira, zvisinei; ivo havana hanya neprotocol pamusoro uye zvimwe zvinhu, saka haufe wakaona chaiyo-yepasi kuita uko kwakakwirira.
Wi-Fi yekumhanyisa ratings Vatengesi vanowanzo tengesa avo 802.11ac ma-routers (uye 802.11ac Wi-Fi mutengi adapital) nekubatanidza nhamba dzekupfuura kune yega yega router yemasaja. Iyo mbiri-bhendi router inokwanisa kuburitsa 400Mbps pane 2.4GHz frequency band uye 867Mbps pane 5GHz frequency band inogona kutsanangurwa se AC1300 router (kutenderera kumusoro kubva ku1,267, zvisikwa). Hauzombofi wakasangana ne1,300Mbps (kana kunyange 1,267Mbps) yemo, asi, nekuti hazvigone kubatanidza ma 2.4- uye 5GHz network pamwechete. Asi iwo maratidziro angangodaro anopa poindi yekuenzanisa.
Google Nest Wifi ongororo: Yakashongedzwa mesh isina waya system neGoogle Mubatsiri yakavakirwa mukati
Netgear Orbi RBK20 kudzokorora: Meshani shoma asi inokurumidza Wi-Fi system
Ramangwana-chiratidzo imba yako neaya maWi-Fi 6 ma-routers
Categories Linksys Post navigation
Nzira Yokuona Sei Kudzokorora Bin Size pa Windows 10 kana 7
Nzira Yokuvakira Raspiberi Pi-Inotsigirwa Retro Video Game Console